१५ लाख ७४ हजारभन्दा बढी आवेदकले मध्य भोटेकोशीको आईपीओ नपाउने
असोज २७, काठमाडौं । मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिएकामध्ये १५ लाख ७४ हजार ४२८ जनाको हात खाली हुने भएको छ ।
कम्पनीले सर्वसाधारणमा विक्री गरेको आईपीओ ८ लाख १९ हजार जना आवदकहरुले मात्र १० कित्ताका दरले गोलाप्रथाको माध्यमबाट हात पार्नेछन् । कम्पनीले प्रतिकित्ता अंकित मूल्य रू. १०० दरको ९० लाख कित्ता आईपीओमध्ये ३ लाख ६० हजार कित्ता कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरेको छ भने ४ लाख ५० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषहरुमा बाँडफाँट गरिसकेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशन मार्फत विक्री गरेको ८१ लाख ९० हजार कित्ता शेयर मात्र सर्वसाधारणमा बाँडफाँट गर्नेछ । कम्पनीले असोज २० गतेदेखि २५ गतेसम्म सर्वसाधारणमा आईपीओ विक्री गरेको हो ।
८ लाख १९ हजार आवेदकहरुका लागि पनि निश्चित रहेको कम्पनीको आईपीओ खरीदका लागि भने २३ लाख ९३ हजार ४२८ जनाको आवेदन परेको छ । विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले दिएको जानकारी अनुसार अन्तिम दिनसम्म ती आवेदकहरुबाट ३ करोड ४३ लाख ६० हजार १० कित्ताका लागि आवेदन परेको हो । जुन मागभन्दा ४ दशमलव २० गुणा बढी आवेदन हुन आउँछ ।
सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्नुपूर्व कम्पनीले कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, संस्थापक कम्पनी तथा ऋणदाता कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि १ करोड ४४ लाख कित्ता आईपीओ विक्री गरिसकेको छ भने आयोजना प्रभावित स्थानिय सहित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका वासिन्दाहरु समेतमा ६० लाख कित्ता शेयर बाँडफाँट गरिसकेको छ ।
सर्वसाधारणका लागि रू. १ अर्ब ५० करोड बराबरको आईपीओ विक्री गर्न वैशाख ५ गतेनै बोर्डको अनुमति पाएको कम्पनीले पहिलो चरणमा १० प्रतिशत शेयर स्थानियमा वितरण गरेको हो । यस पछि दोस्रो चरणमा १५ प्रतिशतका दरले रू. ९० करोड बराबरको ९० लाख कित्ता शेयर कम्पनीले सर्वसाधारणमा विक्री गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ४ अर्ब ५० करोड रहेको छ । सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गरेपश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ६ अर्ब पुग्नेछ ।
कम्पनीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १०२ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यो आयोजनाको कुल निर्माण लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित रू. १६ अर्ब ९७ करोड ३२ लाख १८ हजार रहेको छ ।